सेनाभित्रका यी नवधनाढ्यको कुरा गरेर के साध्य ?
नेपाली सेनाको सेवामा प्रवेश गर्दै अकुत पुस्तैनी सम्पत्ति हुनेहरू पनि छन् । तर, सेवा प्रवेशमा सामान्य आर्थिक हैसियत भएकाहरूको एकाध वर्षमै देखिएको धन सम्पत्ति, पुँजी र विलासी जीवनले सेनामा पनि अकुत कमाउनेहरूको शंका गर्न थालिएको छ । यसरी सेनामा ‘सियो बनेर पस्ने र फाली बनेर निस्कने’ प्रवृत्ति अपनाउँदै ठूलो पदमा पुगेपछि अकुत कमाउन सजिलो बाटो रोज्नेहरूको संख्या कम छैन । एक हिसाबले उच्च तहका आर्मी अफिसरका लागि दुहुनो गाई भएको छ ।
कृष्ण जीसी यतिखेर सबैभन्दा बढी कमाउने अधिकृतको रूपमा सेनाभित्र परिचित छन् । उनको ठिमीतिर तीन रोपनीको बङ्ग्लो रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार– ‘अन्यत्र जोडिएका घर जग्गाको विवरण नै अथाह छ । नेताहरूसँग बाक्लै उठबस गर्न थालेका जीसीले डेढ दुई करोडको गाडी चढ्ने हैसियत बनाइसकेका छन् ।’ उनी लामो समयसम्म सेनाको सम्भार र खाद्य परिवहनमा थिए । उनले नेकपाका र कांग्रेसका केहि नेताका घरमा उपहारका बक्सा बोकेर हिंडेका किस्सा भद्रकालीमा चल्ने गरेको छ ।
अहिले १८ नं. बाहिनीमा रहेका कृष्ण सापकोटा अर्का अकुत कमाउनेमध्येमा पर्छन् । पहिले राष्ट्रिय निकुञ्जमा थिए । तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले निकै पुल्पुलाएका सापकोटाले नेशनल डिफेन्स कोर्सको अवसरसमेत पाइसकेका छन् । क्षेत्रीले पुल्पुलाएका हरुमा धनाड्यको परिचय बनाएका कर्नेल हुन् सुरेश गुरुङ, उनको पनि आलिसान घर र थुप्रै सम्पति थुप्रिएको स्रोतले बतायो ।
कारबाहीको क्रममा रहेका प्रयोगजंग राणालाई पनि सेनाभित्र नवधनाढ्यको रूपमा लिइन्छ । जीवन थापाले आर्मी कलेजमा रहँदा झण्डै सात करोड कमाएपछि अहिले मण्डिखाटारमा पाँच करोडको बङ्ग्लो खरिद गरेका छन् । थापाले भारतीय सिंह परिवारकी एउटी चेलीसँग सम्बन्ध गाँसेका छन् ।
थापालाई अभिलेख फरक पारेर दुई वर्ष भन्दाबढी जागिर खाएको तथ्य फेला पारेपछि बढी अवधिको सम्पूर्ण तलब, भत्ता र सुविधा तिराइएको थियो । यसअघि महिनाको तेह्र लाख तलब हुने र झण्डै तीन वर्षको अव्जर्भरमा समेत जान रुची नदेखाएर उनी यहिँ बसेका थिए । यसबाट पनि उनले यहिँ बसेर कति कमाए होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिने स्रोतको दाबी छ ।
कम्युनिष्टहरु आपूmहरुलाई निम्नवर्ग, मजदुर, किसानको हिमायती ठान्छन् । तर, झण्डै दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट मन्त्रिहरुले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो कार्य गरी नेपाली सेनामा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको समाचार छ । नेपाली सेनाले गत माघमा आफ्नो कर्मचारीका लागि रासनको टेण्डर आह्वान ग¥यो । सो टेण्डरपछि मुलुकभर १२ जना ठेकेदारले ठेक्का पाए । सेनाका लागि रासन टेण्डरमा रासनसहित दुधको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली सेनाको आपुर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय जंगी अड्डाले ठेक्का पार्ने सबै ठेकेदारहरुलाई सबै कर्मचारहरुले गाई भैंसीको दुध मन पराए, सोही अनुसार गाई भैंसीको दुध खुवाउन निर्देशन दियो ।
सोही अनुसार माघ १ गतेदेखि ठेक्का पाएका ठेकेदारहरुले स्थानीय तहका कृषक अथवा कृषकहरुद्वारा संचालित दुग्ध सहकारीसँग एक वर्षको सम्झौता गरी दुध संकलन गर्दै सेनालाई खुवाउँदै आइरहेका थिए । ठेक्का प्रक्रियामा गाई भैंसीको दुध वा डेरीको दूध नपाएमा होल मिल्क (पाउडर) खुवाउनु भन्ने उल्लेख छ । तर, ठेकेदारले गाई भैंसीको दुध खुवाउँदै आएको पाँच महिना बितिसकेपछि अहिले सेनाको आपुर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय जंगी अड्डाले गाई भैंसीको दुध नभई होल मिल्क (पाउडर) खुवाउनु भनेर ठेक्का पाउने सबै ठेकेदारहरुलाई गत जेठ १९ गते सोमबार एक परिपत्र पठाउँदै निम्न स्तरको किसानहरुको पेटमा लात्ती हान्ने काम गरेको छ ।
सो परिपत्रमा भनिएको छ ‘ठेक्का सम्झौता पश्चात त्यस आपुर्तिकर्ताहरुले अस्वाभाविकरुपमा कम दररेटमा कबुल गरेकै कारण दुध बजारमा उपलब्ध नभएको भनी निवेदन दिने र आपुर्ति नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको, हाल बजारमा होल मिल्क (पाउडर) र डेरी वा गाई भैंसीको दुध आवश्यक परिणाममा उपलब्ध नभएको देखिएको र कोभिड—१९ बाट आन्तरिक व्यापारमा परेको नकारात्मक प्रभावसमेतलाई सम्बोधन गर्न समेत राष्ट्रिय उत्पादनलाई टेवा दिनुपर्ने हुँदा सम्झौता अनुसार स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भए बमोजिम गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी होल मिल्क पाउण्डर र डेरी वा गाई भैंसीको दुध बराबर परिणाममा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको मर्म र भावना अनुसार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु भई सोही अनुसार बिल उपलब्ध गराउनु’ भन्ने छ ।
किसानहरुको मुलुकभर मासिक तिन लाख लिटर दुध सेनामा खपद हुँदै आएको थियो । तर, सेनाको गत जेठ १९ गते सोमबारको निर्देशनले किसानहरुको दुध नबिक्ने र खेर जाने भएको छ । यो खेलमा सेनाका उच्च तहका अधिकृत, दुग्ध विकास संस्थाका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद शर्मा र कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको ठूलो आर्थिक चलखेलकै कारण ठेकेदारहरुले दुग्ध विकास संस्थानमा भण्डारण गरिएको होल मिल्क पाउडर दुध किन्नुपर्ने दवाव दिएको बुझिन आएको छ । दुग्ध विकास संस्थानसँग झण्डै ६० हजार मेट्रिक टन पाउण्डर दुध स्टक (मौज्दात) रहेको र सोही पाउडर दुध बेच्नका लागि कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल, उप तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको मिलिभगतमा यो निर्णय गरिएको पाइएको छ ।
यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको सेनाभित्रै व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । बैंकबाट ऋण गरी गाई भैंसी पाली दुध बेची आफ्नो जिविकोपार्जन गरिरहेका निम्नस्तरका किसानहरुले सेनामा दुध बेचबिखन गर्दै आइरहेका थिए । निम्न स्तरका किसानहरुले सेनामा दुध बेचेर आफ्दै दैनिक गुजारा र बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दैै आइरहेका थिए । यसरी निम्न स्तरका किसानहरुको दुध नेपाली सेनामा खपत भइरहेको अवस्थामा कम्युनिष्ट सरकारको निर्देशनमा नेपाली सेनालाई गाई भैंसीको दुध नलिनु भनी पाउडर दुध खुवाउनु भनी निर्देशन दिनुले कम्युनिष्ट सरकार निम्न स्तरको किसानहरुको संरक्षक नभई भक्षकको भूमिका खेलेको यो घटनाले पुष्टि पनि गरिदिएको छ ।